Arday dhamaysatay culuumta Shareecada Islaamka oo machadka Ibnu Qayim ee Bosaso shahaado gudoonsiiyay (Sawiro) – Radio Daljir
Arday dhamaysatay culuumta Shareecada Islaamka oo machadka Ibnu Qayim ee Bosaso shahaado gudoonsiiyay (Sawiro)
Oktoobar 6, 2012 1:52 b 1
Bosaso, Oct 06 – Dufcadii ugu horaysay ee ka qalin-jebisay machadka barashada cilmiga shareecada islaamka ee Ibnu Qayim Al-Jawsiya ayaa waxa shahadooyin lagu gudoon siiyeyay xarunta machadka ee magaalada Bosaso .
Xaflad siweyn loo soo agasimay ayna kasoo qaybgaleen mamulka iyo macaliminta machadka ardayda qalanjebinaysay iyo masuliyinta jamacadaha magalda Bosaso ayaa waxaa ugu horayn hadal kajediyay maamulaha machadka Ustaad Jaamac Maxamed Xasan, waxaana sikooban uga warbixiyay mudadi ay ardaydani ay waxkabaranayeen machadka iyo casharadii ay qaateen .
Maamulaha? ayaa tilmamay in ardayda qalan-jebisay ay 75% ay yihiin haween, halka inta kalena ay yihiin rag waxaana uu intasi kudaray in ardaydani badankoodu ay yihiin dad waaweyn oo aan yarantoodii wakhti uhelin inay wax kabartaan Shareecada Islaamka .
Dhinaca kale gudoomiye kuxigeenka jamacada Bariga africa ee magaaldaa Bosaso Sheekh Maxamed Macalin Axmed oo kamid ahaa aqoonyahanadii lagu casuumay xafladda ayaa? isna uga mahadceliyay maamulka iyo macalimiinta machadka dadaalka ay ugaleen inay soo saaraan dad aqoon uleh cilmiga Shareecada Islaamka, isagoona sidoo kale ku amaanay dowrka ay dadka waaweyn kagajiran ardayad machadka waxkabarta .
Maamulaha jaamcada Bosaso University ayaa isna bulshada magalda Bosaso kula dar-darmay inay gacan kageystan tageero ay ufidiyaan machadka isgoona dhanka kale amaanay mamulaka iyo macaliminta machadka .
gabagabadi xafladda ayaa waxa shahadoyin lagudonsiiyay ardayda qalanjebinaysay, waxaana dareenka ardayda laga dheehanayay farxad iyo rayn rayn .
Dufcadan ayaa noqonaysa midii ugu horaysay ee machadka kaqalan jebisa intii uu furanaa .
Radio Dalji, Bosaso.
Haween tababar caafimaad loogu xiray cisbitaalka guud ee Mudug.
Tartankii kubada cagta ee is-dhex galka dhalinta da’da yar ee koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo soo gaaray kulankiisii kama danbaystaa (Final).
Hamza Faisal Arab 3 years ago
Mashallah Allah haka dhigo kuwo Ku anfaca cilmiga ay barteen dadkooda, diintooda iyo dalkooda inshallah.